ဆွဲကြိုးချသေဆုံးမှု – Eleven Media Group
Posted in CrimeTagged ဆွဲကြိုးချသေဆုံးမှုLeaveaComment on ကျောက်တန်းမြို့နယ်တွင် စတုတ္ထတန်း ကျောင်းသားတစ်ဦး လည်ပင်းတွင် ကြိုးစွပ်၍ ဆော့ကစားရာမှ သေဆုံး
Posted in NewsTagged ဆွဲကြိုးချသေဆုံးမှု, ရန်ကုန်LeaveaComment on မှော်ဘီမြို့နယ်ရှိ ဘုန်းကြီးကျောင်း တစ်ကျောင်းတွင် ၀ါတော် ၁၁ ၀ါရှိ အသက် ၆၀ ကျော်အရွယ် ဆရာတော်တစ်ပါး ဆွဲကြိုးချပျံလွန်
ဒဂုံမြို့နယ်တွင် သမီးရည်းစားကိစ္စ အဆင်မပြေရာမှ အမျိုးသမီးတစ်ဦး ဆွဲကြိုးချသေဆုံးမှု ဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း မေ ၂၈ ရက်တွင် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ရဲတပ်ဖွဲ့မှူးရုံးမှ သိရသည်။
ဆွဲကြိုးချသေဆုံးသည့် အမျိုးသမီးမှာ ဒဂုံမြို့နယ် ပြည်လမ်းအနောက်ရပ်ကွက်ရှိ ခြောက်ခန်းတွဲ နှစ်ထပ်တိုက်တစ်တိုက်တွင် နေထိုင်သည့် မ….(၂၈ နှစ်) ဆိုသူဖြစ်ပြီး ၎င်းသည် မေ ၂၇ ရက်နံနက်ပိုင်းက နေအိမ်လိုင်းခန်း ရေချိုးခန်းအတွင်း၌ အမျိုးသမီးခြုံပုဝါအား ကြိုးအဖြစ်အသုံးပြုကာ ဆွဲကြိုးချ သေဆုံးနေခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ထို့နောက် တာဝန်ရှိသူများရောက်ရှိလာပြီး စစ်ဆေးရာ ၎င်းသည် ပြင်ပဒဏ်ရာ မရှိဘဲ သေဆုံးနေခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး တာဝန်ရှိသူများက သေဆုံးသူ မ….(၂၈ နှစ်) ၏ ဆွေမျိုး များအားမေးမြန်းရာ ၎င်းမှာ သမီးရည်းစား ကိစ္စအဆင်မပြေသဖြင့် စိတ်ညစ်နေသူတစ်ဦးဖြစ်ကြောင်း ရဲမှုခင်းမှတ်တမ်းများအရ သိရသည်။
အဆိုပါဆွဲကြိုးချသေဆုံးမှုဖြစ်စဉ်ကို ဒဂုံမြို့မရဲစခန်းက သေမှုသေခင်းအမှတ်စဉ် (၁/၂၀၁၈) ဖြင့် အမှုဖွင့်ထားပြီး စစ်ဆေးဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်း သိရသည်။
Posted in NewsTagged ဆွဲကြိုးချသေဆုံးမှုLeaveaComment on သမီးရည်းစားကိစ္စ အဆင်မပြေရာမှ အမျိုးသမီးတစ်ဦး ဆွဲကြိုးချသေဆုံးမှု ဒဂုံမြို့နယ်တွင် ဖြစ်ပွား
Posted in Crime, NewsTagged ဆွဲကြိုးချသေဆုံးမှုLeaveaComment on ပန်းဘဲတန်းမြို့နယ်ရှိ တိုက်ခန်းတစ်ခန်းတွင် ၁၈ နှစ်အရွယ် အိမ်အကူမိန်းကလေးတစ်ဦး ဆွဲကြိုးချသေဆုံးမှု ဖြစ်ပွား